ရှေ့က PARMA နောက်မှာ MELOR | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
ရှေ့က PARMA နောက်မှာ MELOR
စူပါတိုင်ဖွန်း PARMA နှင့် နောက်မှ လိုက်လာသော တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MELOR တို့ ကို မြန်မာစံတော်ချိန် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီက ရရှိသော ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံတွင် အောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်ရပါသည်။
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA သည်တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၂ဝ နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိရာ Isbela-Cagayan သို့ ယခင်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုစောပြီးရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း T2K နောက်ဆုံးခန့်မှန်းချက်တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
မုန်တိုင်း၏ အင်အားပြင်းထန်သော အတွင်းပိုင်းသည် Becol Peninsula နှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာနေကြောင်း၊ လေတိုက်နှုန်း ၂၄ဝ မှ ၂၉၅ ကီလိုမီတာနှုန်း (၁၄၉ မှ ၁၈၅ မိုင်နှုန်းခန့်) အထိရှိမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်လက်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: super-typhoon, typhoon, weather. LeaveaComment »